မွညေီထပျအခနျးမြားကို မညျသို့ပွုပွငျ မှနျးမံမညျနညျး? | Weber Cambodia
မွညေီထပျအခနျးမြားကို မညျသို့ပွုပွငျ မှနျးမံမညျနညျး?
All မွအေောကျခနျး products
မြေညီထပ်တွင် ရှိသော ကွန်ကရစ်အကာ (သို့) အုတ်စီနံရံ, ရေလုံအသုံးပြုခြင်းစသည် တို့သည် အဆောက်အဦး စတင်ဆောက်လုပ်တည်း မပြုလုပ်ခဲ့ပေ ,အပြစ်အနာအဆာကြောင့် (သို့) မပြည်စုံသော ရေလုံစနစ်ကြောင့် မြေညီထပ်ရှိ နံရံ နှင့် ကြမ်းပြင်များတွင် ရေငွေ့ရိုက်ခြင်း နှင့် ရေယိုစိမ့်ခြင်း အခက်အခဲများအချိန်ကြာလာသည် နှင့် အမျှ ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ပါသည်။
မိုးရာသီအတွင်း ဖြစ်ပေါ် အခက်အခဲ တွေကြောင့် ဆောင်းရာသီတွင် ဆေးသားနှင့် အချောကိုင် မဆလာသားများ ကွာကျနိုင်လာပြီး ၄င်း ကိစ္စရပ်များကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက် ဆိုးကျိုးရလဒ်များ ရရှိလာနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ် အနှုတ်ရေဖိအားဒဏ်ခံနိုင်သော ဘိလပ်မြေအခြေပြု ရေတာဆေးကို မြေညီထပ်ရှိ ကြမ်းခင်းနှင့် နံရံများကို သုတ်လိမ်းခြင်းဖြင့် ကာကွယ်သင့် ပါသည်။
Consult Weber and learn how to define your team, find our Weber labelled applicators and distributors.
မြေညီထပ်ပြုပြင်းမွန်းမံဖို့ လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သည့် အဆင့်များ
မကျြနှာပွငျသညျ သနျ့ရှငျး,ခွောကျသှေ့ , ခြောမှေ့ ပွီး အမှိုကျ ,ဖှုံ,ဆီဆေး, ထုံးဂြိုး နှငျ့ မကျြနှာပွငျ ပွငျဆငျထားသော အလှာမြားကို မဖွဈမနေ ခှာခွငျး သနျ့ရှငျးရေးကို အောကျကှနျကရဈသားမကျြနှာပွငျ အထိပွုလုပျပေးရပါမညျ။
Weber.dry tex ကို ရပွေငျညီ တခါ ထောငျမှနျတခါ ဖွငျ့ ထောငျ့စိအောငျ စနဈ တကြ သုတျလိမျးပေးပါ ထိုနောကျ တုနျခါမှု ဒဏျခံရနိုငျပါက weber.tec non-shrink grout အသုံးပွုခွငျးဖွငျ့လို အပျသညျ နရောမြားကိုပွုပွငျပေးပါ။
သငျ့တငျ့လြောကျပတျသော ရလေုံဆေးမြားဖွငျ့ လုပျငနျခှငျ လိုအပျခကျြအရ အသုံးပွုရမညျ။ထိုရလေုံဆေးကို ၂ လှာအသုံးပွုပေးသငျ့သညျ။အထူးသဖွငျ့ ဘိလပျမွအေခွပွေု ရလေုံ ရတေားဆေးမြား, ပထမ တလှာအပျေါတှငျ ကနျ့လနျ့ဖွတျ သုတျပေးပါ။